Iyo nyowani yeNetflix icon yafarira veruzhinji | IPhone nhau
Chiratidzo cheNetflix hachina kukakavara senge Instagram
Kutanga yaive Instagram, iine shanduko huru, ipapo Facebook, iyo ichangobva kuzivisa kuvandudzwa kwebhatani "senge" pamawebhusaiti uye ikozvino Netflix. Kubva 28, Iko kunyorera kwatinoshandisa kuona yepasirose inonyanya kufarirwa vhidhiyo sevhisi ine chiratidzo chitsva. Uye chokwadi ndechekuti iyo nyowani icon iri yakanaka kupfuura yekutanga. Zvagara zvichitaurwa kuti kana chimwe chinhu chakarurama, usachibata, asi vakomana veNetflix vanga vachida kutora njodzi uye vatora nhanho yakasimba kumberi. Icon yeNetflix nyowani haina kukonzera kupokana kwakawanda senge Instagram, asi zvikonzero zviri pachena, zvakagadzirwa zvakanaka.
Netflix ipuratifomu inoshamisa, iri kukura zvishoma nezvishoma muSpain. Mune mamwe mativi epasi, senge United States, iyo catalog yakakura kwazvo. Yakanga iri diki yekugadzirisa, kutanga neiyo logo. Runyoro rwave chena, uye hapana chinhu kubva kune isingaverengeke Netflix diki, rakakura tsvuku N pane yakasviba kumashure, kumashure kwakapfuura kwanga kwakachena.
Netflix inoshanda sei?
• Netflix inogara ichiwedzera akateedzana uye mabhaisikopo kukatalog yayo. Tsvaga mazita aripo kana tsvaga zvaunofarira.
• Paunonyanya kutarisa, ndipo pahunonyanya kuve iwo mazano ezvemitambo uye mafirimu akataurwa neNetflix.
• Unogona kugadzira maprofayiri anosvika mashanu munhoroondo imwechete yeNetflix. Maprofiles anotendera nhengo dzakasiyana dzemhuri yako kunakirwa neyakagadzirirwa yavo yeNetflix ruzivo, yakagadzirwa kubva munhevedzano uye mabhaisikopo anodiwa nemumwe nemumwe.
Chii Chitsva muVhezheni 8.8.0
- Nyowani icon
- Yakagadziriswa kugadzikana
- Kukanganisa kururamisa
Iyo yekuvandudza Zvakaitika musi waJune 28, uye semazuva ese, iko kunyorera kuri mahara muApp Store, asi kuti ushandise Netflix uchafanira kunyoreswa kune yavo yekubhadhara pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Chiratidzo cheNetflix hachina kukakavara senge Instagram
Rega ndipinde panetflix
Chinja zvirinyore yako iPhone 6s kuita iPhone 7 [HUMOR]